प्रकाशित मिति: 2015/12/23
टानमा आएर कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
मैले बाहिर रहँदा संस्था राम्रैसँग चलेको होला भन्ने सोचेको थिएँ । यतिको लामो इतिहास बोकेको संस्था व्यवस्थित छ भन्ने लाग्थ्यो । काम गर्ने ठाउँमा केही कमीकमजोरी भईहाल्छ, बाहिर संचारमाध्यममा आएका कुराहरु सही नहोलान् भन्ने ठानेको थिएँ, मैले । तर, टानभित्र छिरिसकेपछि र यो डेढ/दुई महिनाकोबीचमा टान संस्थागत ढंगले संस्था भन्ने रुपका आधारमा चलेको रहेनछ भन्ने महसुस भएको छ ।
टानमा के कस्ता अप्ठ्याराहरु अनुभूत गरिरहनुभयो र !
मूख्य कुरा टान नै ‘ब्ल्याकलिस्टेड’ भएको छ । यत्रो ३५ वर्षको इतिहासमा टान स्वच्छ र पवित्र संस्थाको रुपमा देखिन्न । किन देखिन्न, तपाइँलाई नै पनि थाहा छ । टानमा साढे ६ करोडसम्म बेरुजु छ भनिएको छ ।
टीम्सको रकम नेपाल सरकारको राजस्व हो, त्यसलाई हामीले पारदर्शी ढंगले हिसावकिताव राख्दिन सकेको भए पर्यटन बजार, मन्त्रालय, व्यवसायीहरुमा हाम्रो छवि राम्रो हुनेथियो ।
यसको दोषी को ?
विगतका जुनजुन कार्यसमितिले गलत निर्णय गरे उनिहरु दोषी छन् । कुन –कुन कार्यसमितिले गलत काम गरे, त्यो छानविन हुनुपर्‍यो, यत्तिकै भन्न सकिन्न ।
यीनै गलत क्रियाकलापका कारणले नेपाल पर्यटन बोर्डबाट हामीलाई टीम्सको रकम पाउन सकेका छैनौँ । टिम्स रकम पाउन नसक्दा हामीले ऋण मागेर सचिवालय चलाउने अवस्था छ ।
अर्को कुरा हामीले दुईतीनवटा काम गरेका छौँ, ती प्रोजक्टहरु पनि पारदर्शी ढंगले चल्न सकेका छैनन् । हामीले अध्ययन गर्दा सामथ्र्य र डब्लुएफपिको प्रोजेक्टको कुरा देख्यौँ ।
त्यहाँबाट ठूलो रकम आएको छ । त्यो रकम कहाँ कसरी खर्च भएको छ भन्ने कुरा हामीले हालसम्म चाल पाउन सकेका छैनौँ । हिजोको कार्यसमितिले पारदर्शी ढंगले हिसावकिताव नदेखाएको कारणले यसले हामी अन्योलग्रस्त छौँ । हामीले त्यतातिर पनि खोज्छौँ ।
अघि तपाइँले टान ब्ल्याकलिष्टेड भएको कुरा गर्नुभयो र त्यो काम अप्रत्यक्ष रुपमा गत कार्यसमितिले गरेको संकेत गर्नुभयो हगि !
यो त प्रश्ट कुरा हो । म स्पस्ट रुपमा भन्छु, गत कार्यसमिति, त्योभन्दा अगाडिका कार्यसमिति ककस्ले केके गरे, त्यो भोलि देखिन्छन । तर, हामीले हेर्दा गत कार्यसमितिले ब्ल्याकलिष्टेड गर्‍यो । जसका कारणले हामी त्यहाँ जाँदा केही पनि छैन त !
टान आफ्नै ढंगबाट चल्दिएको भए हामी आफ्ना कार्यक्रम र एजेन्डाहरु अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ । किनकी पर्यटन बोर्ड, मन्त्रालयले हामीलाई पहिला बेरुजु फस्र्योट गरेपछिमात्र रकम दिन्छौँ भनेका छन ।
टेलिफोन उठाउन र चित्त बुझाउनमा नै हाम्रा दिन वितेका छन् । रकम नआउँदा मजदुरहरुलाई पैसा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन, उनिहरुले कचकच गरिरहेका छन् । यो विगतको कार्यसमितिको गलत कामको परिणती हो ।
केही प्रमाणहरु पाउनुभएको छ, त्यस्तो बेथितीको ?
तत्कालका लागि त्यो कुरा हाम्रो जिम्मेवारीभित्र परेन । नियमनकारी निकायहरुले जिम्मेवारी दिएको खण्डमामात्र ती कुराहरु गर्न सकिन्छ । हिजो के के गल्ती भए र अब ती गल्तीहरु दोहो¥याउनु हुन्न भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।
यी विविध समस्याहरुकाबीच टानले के गरिरहेको छ ?
टान भनेको पदयात्रा व्यवसायीहरुको साझा संस्था हो । समग्र पर्यटन व्यवसायीहरुलाई राहत दिनसक्ने, नीतिगत कुराहरुलाई सच्याउन सक्नेलगायतका कामहरु टान एक्लैलेमात्र गर्न सक्दैन । व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा टानले सरकार र व्यवसायीहरुबीच पुलको काम गर्छ । अन्य ‘प्रडक्ट’ सँग मिलेर र हातेमालो गरेर पर्यटकीय गतिविधिहरु अगाडि बढाउन टानले भूमिका खेल्छ ।
तसर्थ हामीले पर्यटनका होटल एसोसियसन अफ नेपाल (हान), नेपाल एसोसियसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), नेपाल एसोसियसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्ट्स (नारा) लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग साझेदारी गरेर एउटै ढोकाबाट पर्यटन मन्त्रालयमा पुर्‍याएर कार्यन्वयनमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । यसका लागि सबै संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका छौँ ।
भूकम्प र पछिल्लो समयको नाकाबन्दीको असरलाई न्यूनिकरण गरी मात्रात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मक फट्को कसरी मार्न सकिन्छ भनेर हामीले हाम्रा कुराहरु अघि बढाएका छौँ ।
यति हुँदाहुँदै टान कार्यसमितिलेमात्र सबै कुरा गर्न त सक्दैन । सचिवालयले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन्.......
तपाइँको कार्यसमितिले टानमा फरक के गर्दैछ ?
मूल कुरा हामी टानलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ । आगामी कार्यसमितिले हामीले जस्तो अस्तव्यस्तता र आर्थिक अपारदर्शिता व्यहोर्नुनपरोस भनेर हामी व्यवस्थापनमा जोड दिन्छौँ । हामी टानमा जति पैसा आउँछ, पारदर्शी ढंगले हिसावकिताव राख्छौँ । त्यस्तै आफ्ना मान्छे भर्ति गरेर, कर्मचारीहरुबीचमा द्वन्द्व बढाईदिएर, तलबै खान नसक्ने स्थिति बनाउनेलगायतका कुराहरुबाट सचिवालयलाई मुक्ति दिलाउँदै सुव्यवस्थित बनाउने काम हामी गर्नेछौँ ।
हालसम्म नयाँ कार्यसमितिले गरिसकेको के छ ?
नयाँ कार्यसमितिले ठ्याक्कै के गर्‍यो भन्नलाई त समय पनि छोटो छ । हामी आएको भर्खर दुई महिना भएको छ । निर्वाचित भईसकेपछि हामीलाई हस्तान्तरणकै काम पनि ढिला गरियो । यस्ता झिनामसिना काममा अल्झिनुपर्दा टानले गति लिन सकेको छैन ।
गर्नुपर्ने काम मन्त्रालयसँग पनि जोडिन्छ, हामीले गरेरमात्र हुँदैन । पीकहरुको अडिट, इन्स्युरेन्सको झमेलाहरुको समाधानका लागि हामीले कार्यविधि बनाउन सुरु गरेका छौँ ।
त्यस्तै ‘नो ट्रेकिङ विदाउट गाईड एण्ड पोर्टर’ भन्ने फाईल अन्तिम चरणमा पुगेको थियो, त्यसलाई हामी तुरुन्तै कार्यन्वयनको तहमा लग्छौँ ।
त्यस्तै निशेषित क्षेत्र खुला गर्ने, सरकारले बढाएको एनएमए पीकको समस्या समाधान गर्ने कुराहरु पनि छन् । महत्वपूर्ण कुरा नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा मानेको छैन, यसबारे पनि हामीले पहल थालेका छौँ । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायीहरुको सहजताका लागि भनेर छुट्टै कार्डको परिचयपत्र बनाउने तयारी गरेका छौँ ।
यसरी हामीले प्राथमिकताका क्रममा फाईलहरु अघि बढाएका छौँ र हाम्रा र फरक साथीहरुबाट आएको घोषणापत्रमा भएका कुरा दुईवर्षमा कार्यन्वयन गर्नका लागि हामीले कामहरु अघि बढाएका छौँ ।
यसैगरी हामीले जेटूजेको अवधारणालाई अगाडि बढाएका छौँ । अर्को व्यवसायी उद्दार कोषको कार्यन्वयनलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ ।